Iindaba - iLifa loBukrelekrele, uBulumko buKhokela iKamva-iQela leGuowang leMibhiyozo yeminyaka engama-25 yeQela laBanjelwa eWenzhou
Ngomhla wama-23 kuNovemba, umbhiyozo weminyaka engama-25 yeQela laseGuowang labanjwa eWenzhou."Ubuchule•Ilifa•Ubukrelekrele•Ikamva" ayingomxholo walo mbhiyozo kuphela, kodwa ikwangumfanekiso womoya wakhe wonke umntu waseGuowang.
Ubuchule buvela ekusukeleni nasekuzingiseni umgangatho.Iminyaka engamashumi amabini anesihlanu yogcino lobugcisa kunye nemvula kuphela ukufaka umphefumlo wobuchule kwisixhobo kunye nokuguqula ubuchule "kwimveliso ephezulu" enokubonwa.
Ukusuka kumzi-mveliso omncinci we-OEM kwilali encinci yokuloba yaseWenzhou, ukuya kwinkokeli kushishino lokuvelisa oomatshini bokushicilela kwilizwe lam, ekuphela kwento engazange itshintshe kwaye idluliselwe phantsi yi "Technical Innovation, Lead Development"."Ukunyaniseka kwentliziyo yokuqala.
Lo nyaka sisikhumbuzo seminyaka engama-40 yohlaziyo nokuvula.Umzi-mveliso wokwenza oomatshini bokushicilela ukwanamava eminyaka engama-40 yophuhliso olukhawulezayo, ukusuka kwimanyuwali ukuya kwisiqingatha esizenzekelayo ukuya kwi-automatic ngokupheleleyo, kwaye ngoku ungenisa ixesha ledijithali nobukrelekrele.Njengobungqina, umthathi-nxaxheba kunye nobungqina bophuhliso loshishino, iQela leGuowang liye lanikela amandla alo kuphuhliso loshishino.
Njengophawu lwesizwe, iQela leGuowang lisoloko likwindawo ephezulu, ligxile kuphando lobugcisa kunye nophuhliso, laziswe ngenkuthalo kwaye lidityaniswe nobuchwepheshe obuphambili bamazwe ngamazwe, lwamkela ngenkuthalo ikamva, lwamkela uphuhliso olukrelekrele loshishino lokuvelisa umatshini wokushicilela.Siyabona ukuba iGuowang Group isebenzisa amandla ayo ukukhokela ikamva!
Aba bazalwana babini ngelo xesha nabo bangene kwiminyaka yokuzithemba.Iminyaka engama-25 yamava, ukuqokeleleka, kunye nemvula idale ukukhula kwabo okufanayo kunye neQela laseGuowang.
Imbali yophuhliso lweQela laseGuowang:
Ngo-1993, inkampani yabhaliswa yaza yasekwa: I-Ruian Guowang Machinery Factory, kwaye yavelisa i-QZ201 yokuqala yokusika iphepha.
Ngo-1998, iGuowang yavelisa i-QZY203AG yokuqala yokusika iphepha le-hydraulic.
Ngo-1999, iGuowang yavelisa ishishini labucala lokuqala laseTshayina iQZYX203B lokusika iphepha ledijithali.
Ngo-2001, iGuowang yavelisa inkqubo yokuqala ye-K elawulwa ngumsiki wephepha.
Ngo-2006, i-subsidiary yaseGuowang: i-Wenzhou Olite Machinery Equipment Co., Ltd.
Ngo-2007, i-subsidiary yaseGuowang: iShanghai Yiyou Import and Export Co., Ltd.
Ngo-2008, iGuowang yaphumelela isatifikethi se-TUV yaseJamani kwaye yafumana isatifikethi.
Ngo-2009, i-Zhejiang Guowang Machinery Co., Ltd. yaphuculwa ukuya e-China • I-Guowang Machinery Group Co., Ltd.
Ngo-2010, isigaba sokuqala somzi-mveliso omtsha waseGuowang sagqitywa kwaye sasiwa kwenye indawo.
Ngo-2011, iGuowang yafumana amalungelo awodwa omenzi wechiza amathathu, inani lepatent eziluncedo kunye neziphumo ezintsha zokuchongwa kwemveliso.ICandelo laseGuowang: IPingyang Hexin Microfinance Company yasekwa.
Ngo-2012, iGuowang yaba lishishini lesizwe lobuchwepheshe obuphezulu.
Kwi-2013, iQela leGuowang kunye neQela laseJamani leBaumann laseka intsebenziswano yeSino-German: Wallenberg Guowang (Shanghai) Machinery Co., Ltd.
Kwi-2014, i-China Guowang Group ibambisene noKomori Komori waseJapan ukwenza intsebenziswano yobuchule.
Ngo-2015, iGuowang yaphuhlisa ngempumelelo kwaye yavelisa umatshini wokuchola (ileyibhile yokudiliza umatshini).
Kwi-2017, siye saqulunqa uchungechunge lwe-Tukuqhwabaumatshini wokusika, owaveliswa ziinkampani ezi-4 kuphela emhlabeni.
Ngo-2018, kwaphuhliswa uthotho lwe-S oluphindwe kabini kumatshini wokubetha isitampu oshushu.
Izahluko eziqaqambileyo kwixesha lempumelelo, kunye nozuko kwiminyaka
Okokuqala, uMnu Lin Guoping, uSihlalo weGuowang Group, wanikela intetho eqongeni.Ngokusuka kumazwi kaLin Dong, kubonakala ngathi siyibonile iminyaka engama-25 kaGuowang yeminyaka eyintlekele, saziva sinombulelo osuk’ entliziyweni kaLin Dong, kwaye sikwavakalelwa kukuba indoda yaseGuowang eyayinobuthunywa kunye nolangazelelo lwangaphambili yayingumatshini wokushicilela eTshayina.Ukholo oluqhubela phambili olungagungqiyo kwindlela yokuvelisa!
Kwangoko emva koko, uSihlalo weQela laseGuowang uLin Guoping, uMphathi Jikelele uLin Guoqiang, uSekela Sihlalo weChina uChu Tingliang, uSekela Sihlalo kunye noNobhala Jikelele weChina yoShicilelo kunye noMbutho woShicilelo lweZixhobo uWang Lijian, uSekela Mlawuli weChina yoShicilelo kunye neZixhobo zoMbutho woShishino. U-Chang Lu Changan, uSihlalo uZhao Guozhu we-Hong Kong Printing Chamber of Commerce, kunye no-Chang Xiaoxia, uMphathi Jikelele we-Beijing Keyin Media kunye neNkcubeko Co., Ltd. beza kwinqanaba kunye ukuze baqalise ukubhiyozelwa kwe-25th yeminyaka ye-Guowang Group.
U-Lu Changan, uSekela Sihlalo we-China yoShicilelo kunye ne-Equipment Industry Association
Umsitho wosungulo olumangalisayo
Uvimba ophambili wobugcisa kunye nophando lobugcisa kunye namandla ophuhliso
Iindwendwe ebezizimase intlanganiso zityelele umzi-mveliso kunye kwaye zafumana amandla obugcisa kunye nobuchule beQela laseGuowang.
Ukhenketho lwasefektri luphelile, lulandelwa yiGuowang Group yokukhutshwa kwemveliso entsha kunye nemisebenzi yengcaciso yobuchwephesha bemveliso.
Okokuqala, intetho emangalisayo kaMnu. Lin Wenwu yasinika ukuqonda okunzulu kobuchule bukaGuowang kwaye samkele ngenkuthalo ikamva xa kuza eli xesha ledijithali kunye nobukrelekrele.
Umsitho omtsha wokuphehlelelwa kwemveliso wawugcwele
UGqr. Thomas Kollitz, eWarrenberg, eJamani wanikela intetho
Ngomhla wama-23 kuNovemba, uMbhiyozo we-25th Anniversary of Guowang wafika njengoko bekucwangcisiwe.Sikunye, sabona inguqu ye-25 yeminyaka ye-Guowang kunye nokuchukumisa okuziswa nguGuowang kwishishini!